Home Wararka Maanta HirShabelle oo ka hor-timid go’aanka lagu hakiyey kursiga loo xiray FAHAD
HirShabelle oo ka hor-timid go’aanka lagu hakiyey kursiga loo xiray FAHAD
Guddiga doorashada maamulka HirShabelle ayaa ku gacan sayray go’aan kasoo baxay guddiga doorashada heer federal oo lagu hakiyey doorashada kursiga HOP#086 ee loo xiray Fahad Yaasiin, taasi oo la filayo inay dhacdo Axadda.
Qoraal kasoo baxay guddiga doorashada HirShabelle ayaa lagu sheegay in warqadda kasoo baxday guddiga heer federal ay tahay mid been abuur ah, islamarkaana aysan jirin cabasho kasoo gaartay kursiga HOP#086.
“Kaddib markii Guddiga maamulka doorashada Hirshabelle GMDHDX iyo dhammaan wakiillada Guddiyada heer Federal iyo Xalinta Khilaafaadka arkeen warqad lagu baahiyay baraha bulshada ee faraysay in la hakiyo Kursiga HOP#086 oo aan wadan wax faahfaahin ah iyo sababo lagu hakin karo kursi qabashadiisa la shaaciyay, Guddiga Doorashada HirShabelle asagoo gudanaya waajibaadkiisa Qaran iyo heshiisyadii Madasha wadatashiga qaran iyo dhammaan habraacyadii doorashada dalka waxa ay idiin xaqiijinayaan in guddigu uusan soo gaarin wax cabasha ah ee ka timid kursiga kor ku xusan,” ayaa lagu yiri qoraalka guddiga HirShabelle.
“Guddiga Maamulka Doorashada Dadban ee HirShabelle waxuu sii dardargelinayaa qabashada kuraasta la jadwaleeyay, oo uu kamid yahay HOP#086 si waafaqsan habraacyada iyo heshiisyada doorashooyinka, mana jirto sabab loo hakiyo kursigaas maadaama la xaqiijiyay odayaasha dhaqanka ee soo xulaya oo uu ku jiro odaygii saxiixa u ahaay doorashadii 2016.”
Qoraal kasoo baxay guddiga heer federal ayaa lagu yiri “Kadib markii Guddiga Hiirgalinta Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) ay soo gaareen cabashooyin ka yimid nabadoonnada iyo oday dhaqameedyada jufada iska Ieh kursiga sumaddiisu tahay HOP#086. Waxaa lagu wargalinayaa Labada Guddi ee warqaddani ku socoto inay hakiyaan qabashada Kursiga kor ku xusan inta laga xalinayo cabashada laga soo gudbiyay.”
Qoraalkaas ayaa sax ahaanshihiisa waxaa xaqiijsay Badweytims hase yeeshee waxaa kadib la isku dayey in jahwareer lagu sameeyo warqaddaas.